အ​မေရိကန်​ ဗဟိုဘဏ်​ အစည်းအ​ဝေးပွဲ
အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်သည် ဒီဇင်ဘာလတွင် အတိုးနှုန်းတင်ခဲ့ပြီးနောက် ယခု ဇန်န၀ါရီလတွင် ငွေကြေးမူဝါဒများကို ယခင်အတိုင်းမပြောင်းလဲဘဲ ဆက်ထိန်းထားမည့်ပုံပေါ်နေပါသည်.
ဇန်နဝါရီ ၃၁ ၂၁:၀၀ MT အချိန်တွင် ထုတ်ပြန်မည့် အ​မေရိကန်​ ဗဟိုဘဏ်​ အစည်းအ​ဝေးပွဲကို ဈေးကွက်က သတိထားစောင့်ကြည့်နေကြပါသည်. ယခုဆွေးနွေးပွဲမှာပါ အတိုးနှုန်းတင်ဖို့ ခိုင်မာတဲ့မှတ်ချက်များဆက်ပြီး ကြားရပါက USDအတွက် အခြေအနေကောင်းနိုင်ပါသည်. အကယ်၍လေသံပျော့ခဲ့ပါက ဒေါ်လာတန်ဖိုး ကျဆင်းနိုင်ပါသည်.
19.02.2019 09:53 အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်မှ US ဒေါ်လာဈေးမြှင့်မှာလား?
ဗဟိုအဖွင့်ဈေးကော်မတီ (FOMC) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၏ ထုတ်ပြန်ချက်အား ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၁:၀၀ MT အချိန်တွင် စီစဉ်ထားသည်။